VACGF 240006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၂၄၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၂၄၀၀၀
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF24000
VACGF24000 6-In-1 Automatic Bottle Filling Machine is an important equipment in producing bottled water.
The machine is designed withamodern, compact industrial design. It is distributed, installed by Viet An company.
Members of Viet An Company (Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ)
VACGF 240006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်သည် ရေဘူးထုတ်လုပ်ရေးမှာ အရေးပါသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ဒီစက်ကို ခေတ်မီပြီး သိပ်သည်းသော စက်ရုံသုံး ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ တပ်ဆင်ပေးပါတယ်။
It has automatic bottle loading, washing, filling, capping and anomaly inspection process with high productivity. This is the best choice for the manufacturers when the demands for bottled water are significantly increasing. It also gives the enterprises new opportunities to expand manufacturing and business scale.
ဒီစက်မှာ ဘူးများကို သယ်ပေးခြင်း၊ ဆေးကြောပေးခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ပေးခြင်း၊ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းနဲ့ မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးခြင်းများကို ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားအောင် အော်တို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရေဘူးတွေအပေါ် မှီတည်လာရတာ များလာတဲ့အခါ ဒါက ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း ဒါက ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ စီးပွါးရေး ချဲ့ထွင်ဖို့ အခွင့်အရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
With the semi-automatic filling machines, it is very difficult for the manufacturers to optimize their productivity. The semi-automatic filling machines impose productivity limitations. A lot of manpower is required to fulfill the production process. This results in an increase in labor cost, capital price and low profits.
တစ်ဝက်အော်တိုစက်တွေကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေက ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီစက်တွေက ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လူအင်အားအများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက အလုပ်သမားစရိတ်တွေများမယ်။ ငွေအရင်းများပြီး အမြတ်လည်း နည်းပါတယ်။
In response to the advancement of science and technology, the automation in the production process has been widely applied in many fields, including the bottled water industry.
သိပ္ပံနည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအပါအ၀င် နယ်ပယ်တော်တော်များများမှာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းးစဉ်တွေမှာ အော်တိုစနစ်ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
With current modern technology,avariety of manufacturing processes have been automated, including the bottle filling and capping process.
ယနေ့တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအပါအ၀င် နယ်ပယ်တော်တော်များများမှာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းးစဉ်တွေမှာ အော်တိုစနစ်ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
Withalot of sequential automatic steps, this machine helps to createaclosed and automatic production process, providing high capacity. The model is designed fully automatic, helping to minimize manpower while ensuring extremely high production efficiency.
နေရာတကျဖြစ်တဲ့ အော်တိုအဆင့်တွေကြောင့် ဒီစက်က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်ပြီး အော်တိုထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီစက်ကို လုံးဝ အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
VACGF24000 6-In-1 Automatic Bottle Filling Machine - aplying the most modern technology in 2019
VACGF240006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်- ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်း
VACGF24000 model is the most advanced product of Viet An among the6in 1 automatic bottle filling lines. It applies the most advanced washing, filling and capping technology of the United States in 2019.
VACGF 24000 က Viet An ရဲ့6In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်တွေထဲမှာ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး ပစ္စည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ US ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး ဆေးကြောခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း နည်းပညာတွေ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Viet An ranks first in Viet Nam and ranks fourth in South East Asia in terms of automatic bottle filling and capping machines. During the past 20 years of construction and growth, we have constantly focused on improving our product and service quality. We have gradually affirmed our No. 1 position in Vietnamese market and No.4in the South East market. Thanks to our unceasing efforts, we have been highly appreciated and recommended by the consumers.
အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ စက်တွေကြောင့် Viet An က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ စတုတ္ထဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လုံးမှာ ကျွန်တော်တို့က ပစ္စည်းနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကို ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ စတုတ္ထရခဲ့ပါတယ်။ မလျှော့သော ဇွဲကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ၀ယ်ယူသူတွေက အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရပါတယ်။
Some cups that Viet An has been awarded
Viet An မှ ဆွတ်ခူးခဲ့သော ဆုတံဆိပ်အချို့
In addition to our genuine automatic bottle filling machines, Viet An also distributes purified water filtration, electrolyte water filtration, mineral water purification lines and industrial tube ice making machines, satisfying ISO 9001:2015 standard.
ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်တွေအပြင် Viet An က ရေသန့်စစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လျှပ်လိုက်အရည် စစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ သတ္တုဆားပါသော အရည် စစ်ထုတ်ပေးခြင်းလိုင်းများနဲ့ စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်များးကိုလည်း ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Viet An ၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် လက်မှတ်- ISO 9001
The machine consists of6stages connected with each other byaconveyor system, generating an automatic and closed production process.
အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ရွေ့လျားစက်စနစ်က ဆက်သွယ်ပေးထားပြီး အော်တိုထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Simple operation process, easy to adjust and change operation capacity. All operation figures are clearly displayed on an LCD screen of the control panel.
ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်န်ိုင်စွမ်းကို ပြောင်းရန် ထိန်းညှိရန် လွယ်ကူသည်။ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာရှိတဲ့ LCD စခရင်ပေါ်မှာ ရှင်းလင်းစွာ ပြသပေးပါတယ်။
The machine offers stable operation, energy saving, fuel saving, and high durability.
စက်က လုပ်ဆောင်မှု တည်ငြိ်မ်တယ်။ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်တယ်။ လောင်စာဆီ ချွေတာနိုင်တယ်။ ကြာရှည်ခံတယ်။
VACGF24000 6-In-1 Automatic Bottle Filling Machine - the best choice for the bottled water manufacturers
VACGF 240006in 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်- ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု
In the current digital era, machines are gradually replacing people in all production and business activities. Therefore, without technical improvement, technology investment, automatic application, the bottled water manufacturers will not be able to compete with other competitors.
ယနေ့ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးမှာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လူတွေအစား စက်တွေကို အစားထိုး အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာ တိုးတက်မှု၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊အော်တို အပလီကေးရှင်းတွေ မပါဘဲ ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေက အခြားစီးပွါးပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
6 automatic steps: Put the bottles together and transfer them quickly with an AC-2 air conveyor. Automatically wash the bottles with 50 washing heads. Automatically fill water into the bottles with 50 filling heads. Automatically cap the bottles with 15 capping heads. Automatically load the caps, ensuring no reserved.cap. Anomaly inspect the anomaly inside the finished bottles. With this model,amanufacturer can reduce 20 operators. It means that our automatic6in 1 pet bottle filling line will help the enterprise save around 140 million dongs per month.
အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်-ဘူးတွေကို အတူတကွထားပြီးတော့ AC-2 လေရွေ့လျားစက်နဲ့ မြန်မြန်ရွှေ့ပေးပါတယ်။ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း အခု ၅၀ နဲ့ ဘူးတွေကို အော်တိုဆေးပေးပါတယ်။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း အခု ၅၀ နဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတယ်။ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ခေါင်း ၁၅ ခုနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးတယ်။ အဖုံးတွေကို ဇောက်ထိုးမဖြစ်သေဘဲ သယ်ပေးတယ်။ ဘူးတွေထဲမှာရှိတဲ့ မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးတယ်။ ဒီစက်က အော်ပရေတာ အယောက် ၂၀ နေရာမှာ အစားထိုးလုပ်နိုင်တယ်။ ဒီစက်ကို သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်လမှာ ဗီယက်နမ်ဒေါ်လာ သန်း ၁၄၀ ၀န်းကျင် ချွေတာနိုင်တယ်။
The machine enables the manufacturers to produce up to 24,000 bottles per hour with onlyafew operators. Compared to manpower use, this machine helps to increase 200-400% of productivity.
ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၂၄၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့် အော်ပရေတာအနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ လူအင်အား သုံးရတဲ့ စက်နဲ့စာရင် ဒီစက်က ထုတ်လုပ်မှု ၂၀၀-၄၀၀% ထိ တိုးတက်စေပါတယ်။
Save electricity cost and time:
All the steps are automatic and constantly operated followingaprogrammed process to minimize operation time. There is no pause during the manufacturing process. The machine is specially designed fora24/7 operation with minimum errors.
လျှပ်စစ်အား ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အချိန်ကို ချွေတာပါ
အော်ပရေးရှင်း အချိ်န်သက်သာအောင် အဆင့်တွေအားလုံးက ပရိုဂရမ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်နေစဉ်မှာ ရပ်နားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒိစက်ကို ၂၄/၇ အော်ပရေရှင်းအတွက် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ချို့ယွင်းချက်နည်းပါတယ်။
It is really easy to track and adjust all operation figures on the LCD screen of the control panel, ensuring the highest accuracy for the manufacturing process as the machines will properly operate according to the specifications programmed.
ထိန်းချုပ်ဘောင်ရဲ့ LCD စခရင်ပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်ပုံတွေ ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိန်းညှိရ လွယ်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ အတိုင်း အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွက် မှန်ကန်မှုကိုလည်း သေချာစေပါတယ်။
The machine generatesahigh capacity of 24,000 bottles of 500ml/hour with less manpower required. Thus, the manufacturer can reduce lots of labor cost and selling price accordingly. In addition, compared to the semi-automatic.machines, this machine can help to reduce 50-60% of production cost. This means that the enterprises can both reduce selling price to increase competitiveness and keep high profits.
လူလုပ်အား အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပြီး ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ 500 ml ဘူး ၂၄၀၀၀ ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေက အလုပ်သမားစရိတ်နဲ့ ရောင်းချတဲ့ ဈေးနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေက စီးပွါးရေး ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ တိုးတက်လာနိုင်ပြီး အမြတ်များစွာရရှိမှာဖြစ်တယ်။
Satisfy requirements on food hygiene and safety:
Currently, in order to protect public health, the State is increasingly focusing on controlling the food hygiene and safety compliance of all industries, including the bottled water industry. The previous semi-automatic.machines withalot of manual production processes make it difficult for the manufacturers to strictly control and ensure food hygiene and safety standards. However, with this automatic.filling line, the manufacturers can be proud to satisfy all requirements on food hygiene and safety standards thanks to close and automatic.production processes.
အစားအသောက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ကျေနပ်စေတယ်
ယခုအခါမှာ နိုင်ငံတော်က လူထုကျန်းမာရေးအတွက် အစားအသောက်သန့်ရှင်းမှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို ရေသန့်ဘူးစက်ရုံတွေ အပါအ၀င် အားလုံးမှာ တင်းကြပ်ထားပါတယ်။ အရင်က တစ်ဝက် အော်တိုစက်တွေက ဒီစံချိန်စံညွှန်းတွေမီဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီစက်က အော်တိုအလုပ်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်လို့ အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်။
6 automatic steps of VACGF24000 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF24000 စက်၏ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်
1. AC-2 air conveyorAC-2 လေရွေ့လျားစက်
AC-2 air conveyor
AC-2 air conveyoris an indispensable unit in the filling lines of high capacity.
● Transfer the bottles from the automatic.bottle blowing system or bottle holder to the washing unit.
● Put the bottles together
● AC-2 လေရွေ့လျားစက်က လုပ်ဆောင်မှု မြင့်မားတဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ လိုင်းတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ယူနစ်ပဲ ဖြစ်တယ်။
● ဘူးတွေကို လေမှုတ်ပေးတဲ့စနစ်ဆီမှ ဆေးကြောပေးတဲ့ ယူနစ်ဆီကို ရွှေ့ပေးပါတယ်။
● ဘူးတွေကို အတူတူ ထားပေးတယ်။
Use of an air conveyor will help to remarkably reduce manpower, reduce operating time and increase productivity. The bottle clamping heads of the washing machine is designed with even distances. If there are still spaces between the bottles, the clamping unit will not operate properly, causing damages to the bottles and operation delay. This will dramatically affect the entire productivity. Thus, we can see that the air conveyor playsavery important role during the production.
လေမှုတ်စက်ကို သုံးတာကြောင့် လူအင်အားနဲ့ အလုပ်လည်ပတ်တဲ့ အချိန် လျှော့ချနိုင်တယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း တိုးတက်စေတယ်။ ဆေးကြောပေးတဲ့စက်ရဲ့ ညှပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေကို ခွါပြီး ဒီဇိုင်းဆင်ထားပေးတယ်။ တကယ်လို့ ဘူးတွေက ကပ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီယူနစ်က အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဘူးတွေးကို ပျက်စီးစေပြီး အလုပ်လုပ်တာ နှေးသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေရွေ့လျားစက်က ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ အရေးပါပါတယ်။
2+3+4 Washing - filling - capping (3-in-1)
၂+၃+၄ ဆေးကြောခြင်း၊လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း
+ Automatic bottle washingVACGF24000 model is equipped with up to 50 washing heads which is much higher than the previous6in 1 automatic washing machines.
● Automatic bottle washing
● Ensure food hygiene and safety standards.
VACGF 24000 မော်ဒယ်မှာ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းက ၅၀ အခုပါပါတယ်။
အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြံမှု စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း
The machine generates air pressure and transfers it to the duct system when the bottles are transferred to the washing unit. At the washing unit, the 50 clamping heads will hold the bottles and rotate 180 degrees to turn them down and connect them to the washing heads. The water will be sprayed from the washing heads under high pressure to clean thoroughly the bottles withahigh capacity of 24,000 bottles/hour.
ဘူးတွေကို ဆေးကြောပေးတဲ့ ယူနစ်ဆီ ရွှေ့နေတဲ့ အချိန်မှာ စက်က လေဖိအားကို ပြွန်စနစ်ထဲ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဆေးကြောပေးတဲ့ ယူနစ်မှာ ညှပ်ခေါင်း အခု ၅၀ က ဘူးတေကို ကိုင်ထားပြီး ၁၈၀ံလှည့်ကာ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းတွေနဲ့ ဆက်ပေးပါတယ်။ ဆေးကြောပေးတဲ့ ခေါင်းတွေက ဘူးထဲကို ဖိအားသုံးပြီး ရေဖြန်းပေးပါတယ်။
VACGF24000 is equipped with up to 50 filling heads. All are imported from Italy with the best quality available nowadays. On the filling heads, there isasensor attached to automatically quantify the water filled into the bottles according to the programmed amount.
● Automatically fill the bottles according to the exact amount.
● Automatically stop when there are no bottles.
This helps to maximize material savings and ensure the highest filling speed and accuracy.
VACGF 24000 စက်ကို လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း အခု ၅၀ နဲ့ လုပ်ထားပါတယ်။ ခေါင်းတွေအားလုံးကို အီတလီမှတင်သွင်းထားပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ရဲ့ ပမာဏအတိုင်း ဘူးတွေကို အော်တိုဖြည့်ပေးဖို့ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်းတွေမှာ ဆင်ဆာပါရှိပါတယ်။
• တိကျတဲ့ ပမာဏနဲ့ ဘူးတွေထဲကို အော်တိုဖြည့်ပေးတယ်။
• ဘူးတွေမရှိတော့တဲ့အခါ အော်တိုရပ်သွားပါတယ်
ဒါကြောင့် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့နှုန်းက အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး တိကျသေချာစေပါတယ်။
VACGF24000 is equipped with up to 15 capping heads. The capping heads are made of steel and coated withalayer of 304 stainless steel, bringing high aesthetics. There are balls attached inside the capping heads to ensure the proper pressure onto the bottles.
● Automatic capping
An hourly capacity of 24,000 caps.
VACGF 24000 ကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁၅ ခုနဲ့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ခေါင်းတွေကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး 304 စတိန်းလက်စ်စတီးအလွှာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတာကြောင့် အမြင်လှပါတယ်။ ဘူးတွေပေါ်ကို ဖိအားသေချာအောင် ခေါင်းတွေထဲမှာ အလုံးလေးတွေ တပ်ထားပါတယ်။
တစ်နာရီမှာ အဖုံး ၂၄၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Fifth step: Bottle loading machine
Automatic cap loading machineAutomatic cap loading machine
● Automatically load the bottle caps to the capping unit.
● Keep the bottle caps in the correct direction without being upside down.
ဒီအဆင့်က လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ လိုင်းမှာ အရေးပါပါတယ်။
• အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ယူနစ်ဆီကို အဖုံးတွေကို အော်တိုသယ်ပေးပါတယ်။
• အဖုံးတွေကို ဇောက်ထိုးမိုးမြော် မဖြစ်စေပါဘူး
Withafilling and capping capacity of up to 24000 bottles per hour, this bottle cap loader is indispensable. It consists of 1 stainless steel cap tray which can contain 20,000 caps. Thus, the operators just need to supply the caps to the tray onceashift. The cap tray is connected toaconveyor which is supported bya304 stainless steel frame. When the filling machine is in operation, the bottle caps should be loaded onto the conveyor. The conveyor connects to the capping machine throughacap duct. Before the caps are transferred to the duct, there will be an air blowing system at the cap conveyor to blow the bottle caps into the duct in the right direction. Just like that, the caps are respectively loaded by the conveyor and blown to the duct. At the joint connecting the duct and the conveyor, an eye sensor is attached to count the number of bottle caps passing. At the lower end of the cap duct connecting to the capping heads, there is also an eye sensor attached to count the caps/
တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၂၄၀၀၀ ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဒီစက်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အဖုံး ၂၀၀၀၀ ဆံ့တဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီး အဖုံးထည့်တဲ့ဗန်းတစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အော်ပရေတာတွေက တစ်လှည့်တစ်ကြိမ် အဖုံးဖြည့်ပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အဖုံးထည့်တဲ့ဗန်းကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖရိန်ပါတဲ့ ရွေ့လျားစက်နဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်က အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ ဘူးတွေကို ရွေ့လျားစက်ဆီ သယ်ပေးင့်ပါတယ်။ ရွေ့လျားစက်က ပြွန်ကို ဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ယူနစ်နဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။ အဖုံးတွေကို မရွှေ့ခင်မှာ ပြွန်ဆီကို အဖုံးတွေကို ပို့ပေးတဲ့ လေမှုတ်စနစ်ရှိပါတယ်။ ပြွန်နဲ့ ရွေ့လျားစက်ကို ဆက်ထားတဲ့ နေရာမှာ အဖုံးအရေအတွက်ကို ရေဖို့ မျက်လုံးဆင်ဆာရှိပါတယ်။
● Detect the anomaly inside the bottles.
● Ensure food hygiene and safety standards during the production
The foreign body scanner will be placed parallel to the conveyor system transferring the finished water bottles through. Thanks to an eye sensor attached, the machine can help to detect any anomaly inside the bottles. Such bottles with anomaly will be rejected accordingly.
• ဘူးတွေထဲက မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးတယ်
• အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို သေချာစေတယ်
ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့ ဘူးတွေကို ရွှေ့ဖို့ ရွေ့လျားစက်စနစ်မှာ အခြား ကိုယ်ထည်စကင်နာကို
အပြိုင်ထားထားပါတယ်။ မျက်လုံးဆင်ဆာစနစ်ကြောင့် ဘူးထဲမှာရှိတဲ့ မူမမှန်မှုကို
In addition to above6automatic steps,VACGF240006In 1 Automatic Bottle Filling Machine the customers can consider to invest below automatic machines to save labor cost and improve productivity:
အပေါ်က အဆင့်တွေအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များလည်း ၀ယ်ယူတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
● VALP22000 bottle loading and arranging machine
● VAD22000 Blowing machine
● VAD22000 လေမှုတ်စက်
● VAL22000 Labeling machine with2heads
● VAL22000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်ထုတ်စက်
● The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt- VAR2200
● စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR22000
● VAS22000 Steam Membrane Shrinking Machine
● VAS 22000 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
● VA22000 Inkjet printers
● VA22000 မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
● VAGM24000 Automatic log membrane shrinking machine
● VAGM24000 လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Technical specifications of VACGF24000 automatic filling machine
VACGF 24000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF24000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMS
VACGF 24000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 50
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 50
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 15
Machine capacity (350ml bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 20,000- 24,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 20,000- 24,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 6,000-7,000
Power ပါဝါ 9.5
3 in 1 Dimension(LxWxH) (mm)3in 1 အတိုင်းအတာ 5300*3200*2850
Weight အလေးချိန် 9000
Air conveyor လေဖြင့် သယ်ယူပေးသောစက် 12000*220*1000
Plastic conveyor (LxWxH) (mm) ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် 75000*160
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF240006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF240006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
1. VALP22000 bottle loading and arranging machine
VALP22000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
2. VAD22000 Blowing machine
3. VAL22000 Labeling machine with2heads
VAL22000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်စက်
4. The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt- VAR22000
စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR22000
5. VAS22000 Steam Membrane Shrinking Machine
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက် VAS22000
7. VAGM24000 Automatic log membrane shrinking machine
လော့အလွှာကို အော်တိုရှုံ့ပေးသောစက်-VAGM 24000
Hỏi đáp & đánh giá VACGF 240006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်